Dowladda Maraykanka oo muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan dalka Kenya | Baydhabo Online
Dowladda Maraykanka oo muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan dalka Kenya
Dowlada Maraykanka ayaa uga digtay muwaadiniinteeda inay u safraan dalka Kenya oo ay sheegtay inay ka dhici karaan weeraro argagixiso.Waaxda arrimaha dibedda ee Maraykanka ayaa ugu baaqday muwaadiniinteeda inay iska ilaaliyaan inay tagaan gobolka Lamu, Xaafadda Eastleigh iyo degmooyinka gobolka Waqooyi bari.
Safaarada Maraykanka ee magaalada Nayrobi ayaa muwaadiniinta Maraykanka kula talisay inay booqan karaan magaalada Mombasa xilliga maalinti, oo ay iska ilaaliyaan isticmaalka doonta looga gudbo gacanka badda ee magaalada Mombsa, sababo xagga ammaanka ah.
Hay’adaha Sirdoonka ee Maraykanka ayaa ka digay suurtagal-nimada Gantaalo dhulka laga rido dhulka oo lala beegsado diyaaradaha.
Maamulka diyaaradaha ee Maraykanka ee loo yaqaan FAA ayaa howlwadeenada duulimaadyada Kenya uga digay inay jirto cabsi weeraro lagu qaado danaha Maraykanka iyo wadamada reer Galbeedka.
Digniintan ayaa ku soo beegmeysa xilli uu amniga Kenya soo hagaagayo , oo dalxiisayaal badan ay imaanayaan Kenya kadib markii ay ka soo kabatay weeraro sababay dhimasho iyo burbur oo Al-Shabaab ay ka geysatay guddaha Kenya.